Faritra Atsimo Andrefana: tsy ampy rano ny mponina any Ampanihy | NewsMada
Faritra Atsimo Andrefana: tsy ampy rano ny mponina any Ampanihy
Mivelona amin’ny katsaka sy ny mangahazo ny mponina any amin’ny distrikan’Ampanihy amin’izao fotoana izao. Lafo ny vary, tsy takatry ny ankamaroan’ny mponina, 550 Ar ny kapoaka. Mijaly rano koa ny any Ampanihy. Ny katsaka sy ny mangahazo avy any Ambovombe izao no azo lazaina fa mamatsy ny mponina any Ampanihy sy ireo kaominina manodidina. “Ho sahirana izahay rehefa tapitra io katsaka sy mangahazo avy any Ambovombe io”, hoy ireo mponina any an-toerana. Inona ny vahaolana ? Tsy misy aloha hatramin’izao, satria maina ny tany, saro-drano ny any Ampanihy, na rano sotroina avy amin’ny Jirama aza, manahirana ankehitriny.
“Andro iray, mandeha ora roa na telo ihany ny famatsian-drano isaky ny fokontany, ny andro manaraka, tapaka tanteraka indray, tsy maharaka ny Jirama. Amin’ny volana septambra na oktobra eo, mety ho tapaka isaky ny roa andro ny rano”, raha ny fanamarihan’ny mponin avy any an-toerana.
Efa antitra rahateo ny fitaovan’ny Jirama, mihena tsy tapaka anefa ny rano, tsy voatrokan’ny fitaovana ao amin’ny Jirama intsony, izay misy efa 30 taona mahery. Soa ihany aloha mba tsy misy olana indray ny jiro any an-toerana fa mandeha tsara. Na izany aza, mila fanavaozana ny Jirama, mandany solika be loatra ny fitaovana ao aminy.
Ny lalana, avy eo Andranovory mankany Ampanihy, 240 km, tsy mbola nisy fanamboarana hatramin’ny Repoblika faharoa. Hanaovana fampanantenana indray io amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Milamina kosa ny tanàna noho ny “Dinabe”, raha ny filazan’ny mponina avy any an-toerana.